Myat Min Soe (@septemberboy7) Twitter Profile • sTweetly
Bio Mobile App Developer
Account created 21-06-2012 01:37:00
iPhone : Vicetone It seems I can’t to play it now.
iPhone : Submitted by 🦩 𝐖̃𝐄̃ 𝐏̃𝐋̃𝐀̃𝐘̃ 𝐆̃𝐔̃𝐈̃𝐓̃𝐀̃𝐑̃ 🦩
Facebook : NLP is very difficult for Burmese because we used non Unicode fonts. We just migrated to Unicode last October. I hope Facebook won't disable Burmese translation because of this. channelnewsasia.com/news/asia/face…
Facebook : eGovernment ဆိုတာ System ကြီးတစ်ခုလုံး စျေးကြီးပေးပြီး ကွန်ပြူတာအကောင်းစားတွေသုံးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ facebook.com/story.php?stor…
Facebook : Brand new ရောင်းတဲ့လူလဲမဟုတ်ပါဘူး ကားပွဲစားလဲမဟုတ်ပါဘူး။
ကားပါမစ်ချပေးမယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်တောင်ကောင်းသွားသေးတယ်။ ကားရောင်းပြီးထဲက ဘာကားစီးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရင် သွင်းစီးမယ်ဆိုပြီးကြံနေတာ ပါမစ်မထွက်ခင်ထဲက။... facebook.com/dev.myatminsoe…
Facebook : ကိုရီးယားကားတွေ ကအခုကောင်းလာပြီး ဂျပန်နဲ့ ယှဉ်နိုင်နေတဲ့အနေအထား။ Hyundai ဆိုရင် Creta က အန္ဒိယမှာရောင်းအကောင်းဆုံး။ India ဆိုတာ ကားဆို စျေးပေါရင် မစီးချင်ဘူး ဈေးကြီးရင်ကြတော့လဲ မစီးနိုင်ဘူး။... facebook.com/story.php?stor…
Facebook : Happy New Year 2020
Facebook : အမြန်လမ်းမှာ accident ဖြစ်တဲ့အထဲ အဖြစ်များတာ အိပ်ငိုက်တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ညဖက်သွားရင် ခဏခဏ အိပ်ငိုက်ပြီး လမ်းဘေးရောက်သွားတာတို့ လမ်းလယ်နဲ့ အရမ်းကပ်သွားတာတို့ တွေ့ရတယ်။ နောက်ကနေ ဟွန်းတွေစွတ်တီးမှ လမ်းမှန်သွားတာမျိုး။... facebook.com/dev.myatminsoe…
Facebook : မှတ်မှတ်ရရပါပဲ iOS App က ရေးပြီးယုံနဲ့မပြီးဘူး App Store ပေါ်တင်မှသုံးလို့ရတာဆိုတော့ review စောင့်ရသေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ပါတ်လောက်အလိုအထိ API မရသေးတာနဲ့ ခရီးမသွားခင် API အပြီးရေး ပြန်ရောက်တာနဲ့ App ကို... apps.apple.com/us/app/devcon-…
Facebook : တင်တဲ့လူတွေ ပြောတဲ့လူတွေ ကို ဥပဒေအရအရေးယူပေးပါ Myanmar President Office Myanmar State Counsellor Office facebook.com/story.php?stor…
Facebook : အခုလဲ ဝယ်နေပြီလို့သတင်းရတယ် ဟုတ်မဟုတ် confirm ပေးပါဦး facebook.com/dev.myatminsoe…
Facebook : ICJ ဆိုတာက ကမ္ဘာ့တရားရုံးပါ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ အငြင်းပွားရင် ICJ မှာ တရားစွဲကြပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘယ်သူကိုမှ တရားမစွဲဘူးသလို ဘယ်သူကမှလဲ တရားမစွဲဘူးပါဘူး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့... facebook.com/dev.myatminsoe…
Facebook : facebook.com/story.php?stor…
Facebook : we stand with ICJ ဆိုလို့ ICJ ဆိုတာ တရားရုံးလေ။ အမှုဖြစ်တာက ဂမ်ဘီယာနဲ့ မြန်မာလေ။ အခုက ဘောလုံးပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးကို အားပေးသလိုဖြစ်နေတယ် LOL
Facebook : မသုံးမနေရPay ကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက ဘာမှမပြောကြဘူးလား 🤔 တစ်ခြား Pay တွေကလဲ ဘာမှမပြောကြဘူးလား
Facebook : KBZ Pay နဲ့ပဲ မဖြစ်မနေသွင်းရမယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ACC Myanmar ကနေပါစစ်သင့်နေပါပြီ။ MPU card နဲ့ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ facebook.com/story.php?stor…
Facebook : အကောင့်ထဲဝင်ကြည့်တာ အမြဲကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ပုံပဲ လှူပေးလိုက်ကြပါဦး facebook.com/story.php?stor…
Facebook : Android မသင်ဘူးလား မသင်ဘူးလား မေးကြတဲ့လူတွေအတွက်
စသင်ပါပြီနော် java သိယုံနဲ့တက်လို့ရပါပြီ။ basic နဲ့ advance ဆိုတာမျိုးမခွဲထားပါဘူး အကုန်သင်ပေးမှာပါ။ facebook.com/story.php?stor…
Facebook : ဟို App က version အသစ်ကို game လိုထုတ်တာကြည့်ပြီး semantic versioning ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ medium.com/@myatminsoe/se…